maxamedsheekafguun Abriil 14, 2017 sheekooyin, Uncategorized
Subeer hoosta ayuu uga riyaaqay weedhaha Salma, wuxuuna si farxadi ka muuqato ku yidhi:, “waayahay wallaal” isagoo ku ladhay “waad mahadsan tahay”.
Ma jirto meel fadhiisi iyo dood dheer midna, hadalkana taagni ayaa la isku dhaafsaday, waayo duruufta ayaan u saamaxayn, Salmana waxay ka werwersan tahay hooyadeed oo aanay waqti badan ka maqnaan karayn ka dibna degdeg ayaa loo kala dhaqaaqay markii intaa la si dhaafday.
Markii ay ka soo jeedsatay hooyadeed ayay intay meel gooniya yara fadhiisatay warqadii furtay, una faadhumaysatay akhriskeeda. Tolow maxaa kaaga soo bixi doona, maxayse ku bilaabmayaan sadarada qoraalka warqadda u horeeyaa?
“Intaa ka dib Salmaay, waxaan filayaa inaad ogtahay, haddii aad ogtahayna aanad dafiri karrin jiritaanka shayga ama waxaa loo yaqaan cishqiga balse haddii aan is idhaahdo tafsiir kooban ka bixi jaceylku waxa uu yahay waxaan shakhsiyan ku micnayn karaa inuu yahay rabitaan qoto fog oo ku beerma qalbiga iyo nudaha dareenka ee qofka aadamaha ah, ka dibna qofka wax jeceli waxaa uu ku sugnaadaa had iyo goor boholyow iyo baahi nafsaaniya oo uu u qabo qofka uu jecelyahay.”
-Eegmo aan la hilmaamin ama kugu reebta xusuus soo noq noqota oo xiiso leh.
-Qosol ilko caddays ah iyo weji furan, oo marba marka ka dambaysa ku sii dhowaada dunida farxadda iyo rabitaanka qofka, kuguna khasba inaadan qofka aad jeceshahay ka ag fogaan.
-Bariido niyadsami xanbaarsan iyo dareen soo dhowayntu ku badan tahay oo aad qofka ku qaabisho had iyo goor.
-Afti murtiyeysan iyo hadal meel mar ah oo qofka had iyo jeer weedhihiisa loo qushuuco, qofkana soo jiita marka aad rabitaankaaga u bandhigayso.
Subeer ilaa markii ay Salma kala tageen oo uu warqada gacanta ka saaray, waxa ku taagan kodol, wuxuuna isweydiinayey tolow, maxay yeeli doontaa?,
Subeer muddadii uu sugayey jawaabta waxa u dhammaaday werwer iyo feker adduunyo, wuxu galay xaalad aamusnaan ah, waxaana naftiisa la soo dersay cidhiidhi iyo culays badan, taas oo keentay inuu cuntadii cuni waayo oo uu galo xaalad cunto ka soomid ah.
Iyadooy sidaa tahay oo uu weli ka wareersan yahay Subeer waxa uu noqon doono go’aanku, ayaa waxa u yeedhaya odaygii u aabaha ahaa kuna war galinaya in ay isku raaci doonaan dalka Sacuudi Arabiya laba maalmood kadib halkaas oo ay ka soo iibin doonaan allaabooyin ganacsi oo la xidhiidha ama kamida kuwa uu ka ganacsado aabihii.
Sidaa awgeed, Subeer, wuxu aabbihii u sheegay inuu maanta soo diyaar garoobo oo soo hagaajisto baasaboor iyo wixii kale ee ka dhiman, isla gelinka dambena ay u fadhiisan doonaan xisaabta dukaanka, si ay cid kale ugu wareejiyaan.
Odaygii, goorahanba wuu yaabana, wuuna arkaa inay wiilkii wax si ka yihiin, balse furihii gaadhiga ayuu u dhiibay, wuxuuna ku yidhi, “Aabbo galabta shakibaad leedahaye gaadhigana ilaali, soona dhakhso,”
balse Subeer ma haleelin inuu odayga u jawaabo, ka dibna intuu furihii gaadhiga degdeg odayga uga qaaday ayuu gaadhigii degdeg furaha ugu rogay, wuxuna afka saaray goobtii ballanta, cabbaar markii uu taagnaa ayay Salma u timid, kadibna waxa la is dhaafsaday salaan xiiso iyo kalgacaltooyo ka muuqato, hase yeeshee markii ay isa salaameen waxa dhacday in ay qadar hal miridh gaadhaya kala aamusnaadaan sidii wax midba gooni shoog u qabsaday dabadeed Subeer ayaa ku tiraabay: “Salmaay waxay ila tahay adiga ayuu ahaa qofka ay arrintu xaggiisa jirtaa ee jawaabta laga sugayaa sidaa awgeed gacaliso soo daa wixii aad inoogu talisay.”
Subeer maskaxdiisu aad ayay u shaqaynaysaa wuxuuna is leeyahay tolow maxaa kaaga iman doona waxaana haysta walwal badan.
Salma iyadu hore ayay go’aan meel u soo dhigatay oo waa ay haysataa jawaabtii laakiin markiiba afka may kala qaadin ee cabaar ayay hoos u yara foorarstay muddadaasi waxay ahayd qadar ka yar miridh badhkii balse Subeer waxay ku sii siyaadisay culays badan wuxu hoosta ka leeyahay (malaha dayro ayey kuu sidaa waa tan hoos u foorarsatee) dareenkiisa waxa ka muuqata firka nax iyo walbaahar saa’id ah.
Salma intay qoorta kor ula soo yara kacday oo ay dhoola caddaysay ayay si degan u tidhi: “waa runtaa oo arrintu aniga ayay ila jirtay oo jawaab ayaa la iga sugayay warqadiina waan akhristay si fiicana waan u fahmay ujeedadii ay xambaarsanayd sidaa awgeed arrintii aad jawaabteeda iga sugaysay markaan dhinac walba ka eegay waan kula qaatay, laakiin waxan ka war sugayaa sida ay arrintaasi kaaga dhab tahay iyo sida aad uga soo baxdo axdigaa.”
Subeer waxa ka go’day falaadh kaga taagnayd garka wadnaha waxaana ka soo booday bahal neef ah kadibna wuxu ku tiraabay “wallaal aad baad u mahadsan tahay aniguna waan ka soo baxayaa waajibkayga” intaa kadib Subeer waxa uu yidhi: “gacaliso, ina wadi aan ku yara sii dhaweeyee dabadeedna way dhaqaaqeen, wadada ay sii marayaan waxa taagan odaygii Dhamal ee Subeer aabihii oo raagsaday wiilkiisa Subeer oo leh “Waar tolow xagee buu wiilkii ku raagay”, haseyeeshee Subeer waxba ma arko oo wuxu ku mashquulsan yahay gabadhii Salma oo uu waxoogaa ballan ah ka sii yara gaadhsiinayo wuxuna leeyahay: “wallaal Salmaay beri oo qudha ayaan magaalada joogaa waxaanana maqnaan doonaa ilaa labaatan cisho waayo odayga aabahay ah ayaan isku raacaynaa Sacuudiga oo aanu alaabo ka soo iibinaynaa kadibna waanu soo noqonaynaa markaa gacaliso nooli kulantee.”
Salma inkasta oo aanay warkaa ku farxin haddana jawaab diidmo ah kama ay bixin waxayna tidhi: “waayahay waan kaa war sugayaa Ilaahayna ha ku soo nabad celiyo.”
Subeer oo ka wer wersan odayga aabihii ee sugaya ayaa yidhi: “Wallaal odaygii aabahay ah ayaa I sugayee maca salaama” kadiba way kala dhaqaaqeen. Subeer isma laha odaygu wuu ku arkayay balse odaygu si fiican ayuu ula socday dhaqdhaqaaqa Subeer iyo inay gabadh isku maran yihiin.
Subeer intuu gaadhiga baakinka dhigay ayuu dukaanka degdeg u soo galay kadibna odaygii ayaa ku yidhi: “Aabo maxaa kugu dhacay laba saacadood ayaad Iga maqnayd labaatan daqiiqo inaad iga maqnaatana waanu isku ogayn.”
Odaygii dhamal ayaa isna ku jawaabay: “Aabo waraaquhu ma waxay ahaayeen gabadhii shirka gaadhiga kuu saarnayd.”
Subeer intuu naxay ayuu xaggaa u sii jeedsaday oo hoos u foorarsaday balse intaanu wax hadal ahi ka soo bixin ayuu odaygii ku celiyay “aabo miyaanan mar hore kugu odhan waxba ha iga qarrin, ta kale miyaynaan isku ogeyn in aad guursato oo aanad igu odhan iga war suga, maxaa dhacay ma wixii aanu isku ogeyn wax ka duwan ayaad wadaa.”
Oday Dhamal sheekadii wuu sii waday, wuxuuna yidhi: “aabe Subeerow, wiil yar baad tahaye, geel labo jir soo wada mar, markaa ma aha inaad iga qariso waxaan kula fahmayo, hadhawna aan iga qarsoomayn.
Dhamal hadalkii ayuu ku sii dheeraaday, wuxuuna ku celceliyay Subeer in aanu waxba ka qarsan ee uu u sheego wax kasta oo la soo dersa, Subeerna intuu xishood iyo ixtiraam dartii gorodda hoos u laalaadiyey ayuu hayedaa guray.
Dhamal, wuxuu marba wiilkiisa Subeer ku tuuraa hadal yar oo sidii kaftan ah, laakiin duurxul ah waxaana ka mid ah, hadaladii uu hoosta uga dhiibayey, “Aabo gabadhu tuma ayey ahayd, waa ina ayo, xagee bay degan tahay IWM.”
Dhamal, hadal dambe oo badan uma noqon. Wuxuuna intuu madaxa yara ruxay ku tiraabay “Waan gartay” Dhamal, wuu ka gaws qabsaday arrinta, kumana qancin gabadha aabaheed iyo qoyska uu wiilkiisu gabadha ka soo xushay, laakiin, wiilkiisa madiga ah ee uu jecel yahay ma tusayo dareen diidmo ah iyo wax niyad jab ku rida toona, hadalkiina halkaa ayey ku hakiyeen, dabadeedna Subeer iyo aabihii waxay ku kala foofeen wixii hawlo ah, ee ka dhimanaa, maadaama ay beri wixii ka dambeeya safar gelayaan, wayna kala dhaqaaqeen.
Subeer habeenkii oo dhan hurdo fiican ma ledin, wuxuuna ka fekerayey xaalada jacayl ee ka aloosantay dareenkiisa iyo mustaqbalkiisa nololeed, isla markaana wuxu ka gam’I waayey xusuusta soo noqnoqonaysa ee Salma.
Dhinaca kale Salma lafteedu waxay wehel ka dhigatay warqadii farriinta dahabka ah xambaarsanayd ee Subeer ugu dhigay waayihiisa jaceyl…
Caku iyo Cakuye, tudacyo gabay (Qamaan Bulxan)